I 2 China Manufacturers & Suppliers & Factory
I 2 - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-I 2)
I-Hobby Sebenzisa i-Carbon Glass Mid Sheets 3.0mm I-Hobby Sebenzisa i-Carbon Glass Sheets 3.0mm yindawo yemvelo, engasindi, i-dustproof, ihlala isikhathi eside, i-anti-corrosion, iqinile ngamandla aphezulu kakhulu kanye nokusebenza okuhle kakhulu, ukuqeda bushelelezi futhi kucacile ebusweni. Imikhiqizo ye-Hobby...
Ishidi le-CNC yokusika i-router yekhabhoni ye-hobby Ishidi le-CNC yokusika i-router carbon ingilazi ye-hobby isetshenziswa kabanzi kuzo zonke izinhlobo zezinsimbi zensimbi, izimpahla zesikhumba, izibaya, izincwadi zokubhalela, ubucwebe, ifenisha kanye nokunye ukuhlobisa okungaphezulu komhlaba. imishini yezemidlalo...
amashidi weglasi wekhabhoni omshini wokuhudula Kuhlanganiswa imicu ye-carbon kanye nemicu yengilazi enqamula ku-90 ° ifakwe i-epoxy resin futhi ibunjiwe ngaphansi kwe-vacuum kuhhavini. Amashidi weglasi wekhabhoni we-washers kufanelekile ukwenza amapuleti wokufaka ama-motor, ama-deski omsakazo, izimpondo, njll....
I-CNC 3K Woven Pure Carbon Glass Sheet Pure Ama-CNC Glass Fiber Sheets kanye neCarbon Fiber Plates zingenziwa zibe yi-carbon fiber ecwengekile noma ingilazi yefayibha yangaphakathi enobuso bekhabhoni fiber, ububanzi obuqhamuka ku-0mmmm kuye ku-50mm, ubukhulu nosayizi obekiwe. Yima isixazululo esiphelele, sinikezela...
I-3K Woven Carbon Glas Sheet ye-Multi-rotors Leli ishidi le-carbon ingilazi, i-3K Woven Carbon Glass Sheet yama-Multi-rotors ithandwa kakhulu ezintweni zokusebenzisa isikhutha. Kokubili ukwakhiwa kwe-0/90 degree and 0/45 / -45 / 90 degree (Quasi-isotropic) kuyatholakala. Ngenxa yesisindo esikhanyayo, i- 3K Woven...
I-Carbon Glass Plates Matte Glossy Hobby Toy Imikhiqizo yamathoyizi eglasi we-Carbon matte glossy hobby toy toy : Ukuqina kwekhabhoni kuqiniswe i-single-sheet sheet, inqubo yokubumba iyinhlangano ye-carbon fiber engamisiwe i-resin ngemuva kokupholisa isikhunta kanye ne-pultrusion eqhubekayo. Carbon ingilazi amapuleti...
I 2 I-2 ICap Screw 2 I-0 I-Steel Nut ICap Screw 1 / 4-20 ICap Screw 4 I-Hex Head Screw 8-32